एन्ड्रोइड उपकरणहरू - फोन, ट्याबलेट, स्मार्टवाच र अधिक! | Androidsis (पृष्ठ १))
रेन्डरहरूले गुगल पिक्सल X XL कालो, पुदीना र सेतोमा देखाउँछन्
गुगल पिक्सेल X एक्सएलको नयाँ रेन्डररहरूले उपकरणको तीन सम्भव र colorsहरू धेरै विशेष डिजाइनको साथ देखाउँदछ
शाओमी रेडमी नोट Pro प्रो: नयाँ शाओमी फोन अब आधिकारिक भएको छ
शाओमी रेडमी नोट Pro प्रो: विशिष्टता, मूल्य र सुरुवात। नयाँ जिओमी मध्य-दायरा एशियामा पहिले नै उपलब्धको बारेमा सब पत्ता लगाउनुहोस्।
Vivo ले इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट पाठकहरूको चौथो जेनेरेसन घोषणा गर्‍यो
Vivo ले स्कुलमा फिंगरप्रिन्ट रिडरहरूको चौथो जेनेरेसन घोषणा गर्‍यो र क्वालकॉमको हातबाट नयाँ एक्सलेरेसन डीएसपी टेक्नोलोजी।
के एप्पल वाच बजारको सर्वश्रेष्ठ स्मार्टवाच हो?
अनन्य एप्पल वाच श्रृंखला ले "१" घण्टा "१on घण्टाको स्वायत्तता प्रदान गर्दछ, कुनै श doubt्का बिना यसको ब्याट्री अझै पनि अचिलिस हिल हो
एन्ड्रोइडमा कल फर्वार्डिंग कसरी सक्रिय वा निष्क्रिय गर्ने
कसरी सक्रिय वा निष्क्रिय गर्न को लागी तपाइँको एन्ड्रोइड मोबाइल मा कल अग्रेषण। तपाईंको फोनमा यो प्रकार्य प्रयोग गर्नका लागि चरणहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
एक लीक निमन्त्रणाले पुष्टि गर्दछ कि वनप्लस6टी अक्टुबर १ on मा प्रस्तुत गरिनेछ
एक लीक गरिएको छविले OnePlus 6T सुरुवात कार्यक्रमको निम्ता देखाउँदछ र अब हामी जान्दछौं कि अक्टुबर १ October यो आधिकारिक हुने मिति हुनेछ।
कसरी तपाईको एन्ड्रोइड फोनको सेन्सर क्यालिब्रेट गर्ने
कसरी एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको सेन्सर क्यालिब्रेट गर्ने। एक साधारण तरिकामा तपाईंको एन्ड्रोइड फोन क्यालिब्रेट गर्न सक्षम हुन अवस्थित विधिहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
इभान ब्लासले नयाँ रेन्डरमा गुगल पिक्सेल and र X एक्सएलको डिजाइन पुष्टि गर्दछ
गुगल पिक्सेल and र X XL को डिजाईन इभान ब्लास द्वारा लीक गरिएको नयाँ रेन्डरमा देखा पर्दछ। फर्मको अर्को फोनहरू कस्तो हुने छ पत्ता लगाउनुहोस्।
कोरियाली कम्पनीले युरोपमा 'सामसु Bud बड्स' को लागि पेटेन्ट दर्ता गर्‍यो
सामसु Bud बुड एक वायरलेस हेडसेट हुन सक्छ Bixby एक निजी सहायक को रूप मा। सबै दांव चालु छ।
हुआइनका अनुसार किरिन 980० एप्पलको ए १२ बायोनिक भन्दा राम्रो छ
हुवावेको किरिन्ज Apple Apple० एप्पलको ए १२ बायोनिक चिपसेट भन्दा राम्रो छ, चिनियाँ कम्पनीले जनाएको छ। यस ब्राण्ड कथनको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
वनप्लस T टी वास्तविक फोटोहरूमा देखा पर्दछ र यसको डिजाइन उजागर गरियो
OnePlus 6T वास्तविक फोटोहरूमा देखा पर्‍यो, यसको वाटरड्रप डिजाइन प्रकट गर्दै। फर्मको अर्को फ्लगशिप कस्तो हुनेछ भनेर फेला पार्नुहोस्।
आदर हुआवेईबाट अलग हुने छैन
चीनका विभिन्न मिडियाका हल्लाहरू पछि, यो पुष्टि हुन्छ कि होनर र हुवावेले एकल ब्यापार समूह गठन गर्ने छन।
शीर्ष Banggood प्रस्ताव - सेप्टेम्बर २ to देखि 24०, २०१ of को हप्ता
सेप्टेम्बर २०१ of को सर्वश्रेष्ठ बg्गगूड प्रस्तावहरू। सेप्टेम्बर २ to देखि 2018०, २०१ 24 को हप्ताको नयाँ प्रस्तावहरूको साथ अपडेट भयो
तपाईं अब Oukitel WP2 केवल १ 190 ० यूरो मात्र आरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ
यदि तपाइँ तपाइँको पुरानो स्मार्टफोनलाई छिट्टै नवीकरण गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ र तपाइँ झटाहरू, झरना र पानी प्रतिरोधात्मक मोडल खोज्दै हुनुहुन्छ भने, Oukitel WP2 तपाईले खोजिरहनु भएको मोडेल हुन सक्छ।
शाओमीले Xiaomi Mi 8 Lite को अन्तर्राष्ट्रिय सुरुवातको घोषणा गर्न शुरू गरिसकेको छ
शाओमी मी Lite लाइटको अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपणको घोषणा हुन थाल्छ। फोनको अन्तर्राष्ट्रिय सुरुवातको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
Huawei Mate 20 को नयाँ भिडियो लीक भयो
Huawei Mate 20 को नयाँ भिडियो फिल्टर गरीएको छ। चिनियाँ ब्रान्डको उच्च अन्तको अन्तिम डिजाइन यस फिल्टर गरिएको भिडियोलाई धन्यवाद दिनुहोस्।
Huawei Nova 3i को नयाँ संस्करण6GB को रमको साथ १२128 GB को ROM सुरुवात गरियो
Huawei Nova 6i को 128 जीबी रैम र3GB आन्तरिक भण्डारण स्पेसको नयाँ संस्करण जारी भयो। नयाँ रंग विकल्प पनि।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ए ((२०१)) भारतमा यस हप्ता सुरू गर्दछ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी A7 (२०१)) भोली भारतमा सुरूवात गर्दछ। सामसु'sको ट्रिपल रियर क्यामेरा फोनको सुरुवातका बारे थप जान्नुहोस्।
LG G5 ले Android Oreo प्राप्त गर्न सुरू गर्दछ
दिग्गज एलजी जी ले लामो उपयोगकर्ताबाट अपडेटेड अपडेट प्राप्त गर्न शुरू गरिसकेको छ जुन धेरै प्रयोगकर्ताहरूले एन्ड्रोइड ओरियोमा आशा गरेका थिए। यो अपडेट कोरियामा पहिले नै उपलब्ध छ।
नयाँ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी A7 को वालपेपर डाउनलोड गर्नुहोस्
यदि तपाईं नयाँ सैमसंग ग्यालेक्सी A7 वालपेपरको मजा लिन चाहानुहुन्छ भने, यस लेखमा हामी तपाईंलाई तिनीहरूको डाउनलोड गर्ने तरीका देखाउछौं।
पूर्ण ओप्पो A7 सुविधाहरू अनावरण गरिएको: .6.2.२ ″ HD + प्रदर्शन, SD450 र अधिक
ओप्पो ए of का टेक्निकल स्पेसिफिकेसन लीक भयो। फर्मको अर्को कम प्रदर्शन स्मार्टफोनको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
TENAA द्वारा नयाँ Huawei Y9 (२०१)) विशेष विवरण लीक भयो
Huawei Y9 (२०१)) TENAA मा यसको मुख्य प्राविधिक विशेषताहरु संग लीक भएको छ। यस अर्को फोनको सबै विवरणहरू जान्नुहोस्।
यी सामसु'sको नयाँ स्मार्टफोन4क्यामेराको विशेष स्मार्टफोन हुन सक्छ
यी नयाँ टर्मिनलको विशिष्टताहरू हुन सक्छन् जुन सामसु अक्टुबर ११ मा cameras क्यामेराको साथ प्रस्तुत गर्दछ
ग्यालक्सी ए Pro प्रोमा चार रियर क्यामेरा हुने थियो
ग्यालक्सी ए Pro प्रो को पहिलो चश्मा लीक भयो। चार रियर क्यामेराको साथ सामसु'sको नयाँ फोनको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस्।
शाओमी मी Pro प्रो चाँडै नै चाइना बाहिर सुरूवात हुनेछ
शाओमी मी 8 प्रो औपचारिक रूपमा चीन बाहिर सुरूवात हुनेछ। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्तको प्रक्षेपणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
Geekbench Realme2प्रो को विभिन्न विनिर्देशहरु को विवरण
Realme2Pro Geekbench मा लीक भएको छ। भारतीय बजारमा केन्द्रित कम्पनीको अर्को टर्मिनलको लीक विवरणहरूका बारे जान्नुहोस्।
नोकिया .7.1.१ प्लसको रेन्डर भिडियोमा देखा पर्दछ र यसको डिजाइनको अधिक विवरणहरू प्रकट गर्दछ
नोकिया .3.१ प्लसको थ्रीडी डिजाइन भिडियो रेन्डर मार्फत फिल्टर गरिएको छ। ब्रान्डको अर्को उपकरणको बारेमा जान्नुहोस्।
एन्ड्रोइड पाईको दोस्रो बेटा नयाँ हुआवेली फोनहरूमा आउँदछ
नयाँ एन्ड्रोइड पाई बीटा हुवावे र हनर फोनहरूमा आउँदैछ। नयाँ बेटाको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन सुधार र नयाँ प्रकार्यहरू ल्याउँछ।
लेनोवो Z5 प्रो, फर्म को अर्को प्रमुख फ्लिप्स को धेरै विशिष्टताहरु फिल्टर
लेनोवो Z5 प्रो का धेरै प्राविधिक विवरणहरु लीक भएको छ। फर्मबाट अर्को स्मार्टफोनको बारेमा सबै सिक्नुहोस्।
वनप्लस सँग पहिले नै स्थिर तरीकामा एन्ड्रोइड .6.० पाई छ
वनप्लस ले पहिले नै एन्ड्रोइड .6.० पाईमा अपडेट गर्दैछ, गुगलको अपरेटिंग प्रणालीको सबैभन्दा नयाँ संस्करण। हामी तपाईंलाई विवरण दिन्छौं।
हुवावेले आईफोन एक्सएस किन्नका लागि कतारमा रहेका मानिसहरूलाई रिचार्जेबल ब्याट्री वितरण गर्दछ
एसियाली निर्माता Huawei एप्पल स्टोर को क्लासिक कतार को फाइदा लिएको छ २०० रिचार्जेबल १०,००० mAh ब्याट्री दिन
शाओमी मी5एस प्लस पहिले नै एन्ड्रोइड .8.0.० ओरेओ प्राप्त गर्दैछ
शाओमी मी5एस प्लसले एन्ड्रोइड .8.0.० ओरेओ प्राप्त गर्दैछ नयाँ अपडेटको लागि धन्यवाद। सबै विवरणहरू जान्नुहोस्।
Pocophone F1 अपडेट प्राप्त गर्दछ जसले अनुहार अनलक सक्रिय गर्दछ
भर्खरको महिनाको स्टार टर्मिनल मध्ये एक, Pocoph9ne F1 भर्खरै एक अपडेट प्राप्त भयो जुन अनुहार अनलक गर्न सक्रिय गर्दछ।
हुवावेको पहिलो G जी फोन फोल्डेबल हुनेछ
5G को साथ पहिलो Huawei फोन फोल्डेबल हुनेछ। २०१ phone को मध्यमा बजार हिट गर्ने चिनियाँ ब्रान्डबाट यस फोनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
नोकिया Plus प्लस आधिकारिक रूपमा डिजिटल कल्याण प्राप्त गर्दछ
नोकिया Plus प्लसले अब डिजिटल कल्याणकारी डाउनलोड गर्न सक्दछ। यस अनुप्रयोगको बारे अधिक जान्नुहोस् जुन कम्पनी फोनमा पहिले पुग्छ।
Asus ROG फोन अक्टुबर मा आउँछ
Asus ROG फोन यूरोप मा अक्टुबर को अन्त मा शुरू हुन्छ। युरोपमा यो फोनको प्रक्षेपणको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
नोकिया अक्टुबर its मा आफ्नो नयाँ फोन प्रस्तुत गर्दछ
नोकिया अक्टुबर its मा आफ्नो नयाँ फोन प्रस्तुत गर्दछ। नयाँ फोनको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् जुन फर्मले आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गर्दछ।
Xiaoai स्मार्ट अलार्म घडी, Xiaomi को नयाँ स्मार्ट अलार्म घडी २० भन्दा कम यूरो को लागी
शाओमीले नयाँ अत्यधिक सस्तो उपकरण सुरू गर्यो। हामी Xiaoai स्मार्ट अलार्म घडीको बारेमा कुरा गर्दैछौं, Xiaomi को नयाँ स्मार्ट अलार्म घडी।
Meizu अर्को साल एक 5G स्मार्टफोन शुरू गर्दैन
Meizu का सीईओको पछिल्लो कथन अनुसार चिनियाँ कम्पनीले अर्को बर्षमा network जी नेटवर्क समर्थन गर्न सक्ने स्मार्टफोन लॉन्च गर्ने छैन।
नोकिया .7.1.१ प्लसको डिजाईन र विशेष विवरण लीक भयो
नोकिया .7.1.१ प्लस: लीक डिजाइन र विशिष्टता। यस ब्रान्डको नयाँ प्रीमियम मिड-रेंजको बारेमा फेला पार्नुहोस् जुन मार्केटमा छिट्टै हिड्नेछ।
शीर्षले लाइटइन् बक्स प्रदान गर्दछ
शीर्षले लाइटइन्ब्स बक्सलाई सेप्टेम्बर २०१ of को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावहरू प्रदान गर्दछ। हामी लोकप्रिय स्टोरमा पाउन सक्ने प्रस्तावहरूको बारेमा बढि जान्नुहोस् जहाँ तपाईं स्मार्टफोन, ट्याबलेट, ल्यापटप, केसहरू, सामानहरू र अन्य धेरै ग्याजेटहरू उत्कृष्ट मूल्यहरूमा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै राम्रो प्रस्तावहरू जुन पछिल्लो घण्टा र तपाईंले अहिले फाइदा लिनुपर्नेछ। ENTERS!
LG V40 ThinQ को विभिन्न प्राविधिक विवरण लीक भयो
LG V40 ThinQ को विभिन्न प्राविधिक विवरण लीक भयो। यो फोनको साथ दक्षिण कोरियाली कम्पनीले हाम्रो लागि के तयारी गरेको छ पत्ता लगाउनुहोस्।
MIUI १० सहित MIUI का लागि थिमहरू कसरी डाउनलोड गर्ने
शाओमी मी Lite लाइट चीनको बाहिर सुरूवात हुनेछ
शाओमी मी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुरूवात हुनेछ। यस फोनलाई चीनको बाहिर नयाँ बजारमा सुरूवात गर्ने बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
OnePlus 6T को पहिलो घोषणा यहाँ छ
OnePlus 6T को पहिलो आधिकारिक घोषणा अनावरण गरियो। यसको पहिलो टिभी विज्ञापनको लागि ब्रान्डको उच्च-अन्त धन्यवादको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
ग्यालक्सी A7 2018: तीन रियर क्यामेराको साथ पहिलो सामसु।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी A7 2018: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। तीन रियर क्यामेराको साथ पहिलो सामसु .को बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
गुगल होम मिनी बजारमा सब भन्दा बेच्ने स्पिकर हो
गुगल होम मिनी स्मार्ट स्पिकर बजार नेतृत्व गर्दछ। गुगल स्पिकर बिक्री को बारे मा दुनिया भर मा खोज्नुहोस्।
अब ग्यालेक्सी नोट the मा Bixby बटन लक गर्न सम्भव छ
तपाईं ग्यालक्सी नोट on मा बिक्सबी बटन लक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं कसरी फर्मको उच्च-अन्तमा सहायक बटन लक गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस्।
नोकिया गेमि phone फोनमा काम गर्दैछ
HMD ग्लोबल कम्पनी गेमरहरु को लागी एक स्मार्टफोन मा काम गरीरहेको छ। नोकिया को योजनाहरु को बारे मा अधिक जान्नुहोस्।
5G समर्थन को साथ पहिलो Huawei फोन अर्को वर्ष आउँदैछ
हुवावेले २०१5को मध्यमा एक G जी फोन सुरुवात गर्नेछ। किरिन 2019 980० को साथ यो हस्ताक्षर फोनको सुरुवातको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
Meizu V8 र V8 प्रो, चिनियाँ कम्पनी को नयाँ आर्थिक मध्य रेंज
Meizu ले दुई नयाँ मध्य-दायरा उपकरणहरू पेश गरेको छ: Meizu V8 र V8 Pro। उनीहरूको सबै प्राविधिक विवरणहरू, सुविधाहरू र मूल्यहरू जान्नुहोस्।
Xiaomi Mi 8 Pro: फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको साथ नयाँ मोडेल स्क्रीनमा एकीकृत
Xiaomi Mi 8 Pro: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। आज आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्तको बारेमा सबै फेला पार्नुहोस्।
शाओमी मी Lite लाइट: शाओमीको नयाँ मध्य-दायरा
Xiaomi Mi 8: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। शियोमीको नयाँ मध्य-दायरा फोन अनावरण आजका बारे थप जान्नुहोस्।
Meizu X8 सुरूवात भयो: .6.2.२ इन्च FHD + प्यानल, स्न्यापड्रैगन 710१० र अधिक
Meizu X8 आधिकारिक हो। क्वालकॉमबाट अष्ट-कोर स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसरको साथ कम्पनीको नयाँ मोबाइलको बारेमा सबै सिक्नुहोस्।
शियोमीले एन्ड्रोइड टिभीको साथ तीन टेलिभिजनमा काम गर्दछ
शाओमीले एन्ड्रोइड टिभीको साथ तीन टेलिभिजन प्रक्षेपण गर्ने छ। फर्मको नयाँ मोडेलहरू बारे अधिक जान्नुहोस् जुन चाँडै युरोपमा आइपुग्नेछ।
Meizu 16X: नयाँ प्रीमियम मध्य दायरा अब आधिकारिक छ
Meizu 16X: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। आज आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत चिनियाँ ब्रान्डबाट नयाँ फोनको बारेमा सबै फेला पार्नुहोस्।
के स्न्यापड्रैगन 835 ले रेजर फोन2प्रयोग गर्दछ?
Razer फोन2एक प्रोसेसर को रूप मा स्नैपड्रैगन 835 प्रयोग गर्दछ। फर्मको नयाँ फोनको बारेमा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् जुन गत वर्षको प्रोसेसरले प्रयोग गर्थ्यो।
सामसुले कुल चार ग्यालक्सी एस १० प्रस्तुत गर्दछ
सामसुले ग्यालक्सी एस १० दायरामा चार मोडलहरू सुरूवात गर्दछ। कोरियाली कम्पनीको यस दायरामा कुन फोनहरू हुनेछन् भन्ने बारे थप जान्नुहोस्।
Q2018 XNUMX को लागि शीर्ष कमाई फोन निर्माताहरू
एक नयाँ अध्ययनले खुलासा गरेको छ कि कुन कम्पनीहरूले यस बर्षको दोस्रो त्रैमासमा अधिक फाइदाहरू पाएका छन्। हामी तपाईंलाई सबै विवरण दिन्छौं।
शाओमी सीईओले मिआ 8 युवाको दुई संस्करणहरूको ढाँचाको साथ पुष्टि गर्दछ
यसको सुरूवात भएको केही दिन पछि, शाओमी मी Lite लाइट, मि Mi युवा संस्करणको रूपमा पनि चिनिन्छ, ...
गुगल पिक्सेल of को पहिलो आधिकारिक छविहरू फिल्टर गरियो
पिक्सेल of को पहिलो आधिकारिक छविहरू पहिले नै चुहावट भयो। नयाँ गुगल फोनको डिजाइनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J4 + र ग्यालक्सी J6 + पहिले नै आधिकारिक छन्
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J4 + र ग्यालक्सी J6 +: आधिकारिक विशिष्टता। कोरियाली फर्मको पहिले नै आधिकारिक दुई नयाँ मोडेलहरूको बारेमा सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्।
Realme ले भारतमा बिक्री गरिएको फोनको एक मिलियन युनिट मनाउँछ
रियलमीले घोषणा गर्‍यो कि यसले भारतमा एक मिलियन युनिट स्मार्टफोन बेचेको छ। तथ्या्कहरूमा Realme १ र २ सामेल छन्।
शाओमी रेडमी नोट Pro प्रो यसको छविहरू, विनिर्देशहरू र मूल्यको साथ एलिसप्रेसमा देखा पर्दछ
शाओमी रेडमी नोट Pro प्रो एलीएक्सप्रेसमा यसको सबै टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्सको साथ देखा पर्‍यो। यस फोनका बारे सबै कुरा जान्नुहोस्।
ग्यालक्सी S8 यसको नवीनतम अपडेटमा इमोजी र ग्यालक्सी S9 को स्लो-मोशन समारोह प्राप्त गर्दछ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस of को नयाँ सुरक्षा अपडेटले हामीलाई दुई महत्त्वपूर्ण नवीनता प्रदान गर्दछ, जुन ग्यालक्सी एस of को हातबाट आउँदछ
शाओमीलाई MIUI १० कसरी अपडेट गर्ने
https://youtu.be/RPRbG1SpmKk Si ya estás cansado de entrar en los ajustes de tu Xiaomi para mirar si ya te ha llegado la actualizaciónaMIUI 10, deja ya Vídeo tutorial en el que te enseño cómo actualizar XiaomiaMIUI 10 pasoapaso. En este caso el Xiaomi Mi6 aunque válido para todos los modelos.
[APK] शाओमी मी इमोजी कसरी स्थापना गर्ने
नोकिया of को प्रक्षेपण फेब्रुअरी २०१ until सम्म ढिलाइ हुनेछ
नोकिया of को प्रक्षेपण २०१ until सम्म ढिला भयो। फर्मको उच्च-अन्तको सुरूवात ढिलाइको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
सामसुले चाँडै नै ग्यालक्सी जे दायरा हटाउनेछ
सामसुले ग्यालेक्सी जेको दायरा हटाउन गइरहेको छ। कोरियाली कम्पनीले फोनको दायरामा ल्याउने परिवर्तनहरूको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
मोटोरोला वन पावर भारतमा सेप्टेम्बर २ on मा सुरूवात हुनेछ
मोटोरोलाले भर्खर एउटा ट्वीटको माध्यमबाट घोषणा गरेको छ कि एक पावर सेप्टेम्बर २ on मा भारत आइपुग्नेछ। पत्ता लगाउनू।
हुआवेईले मेट २० प्रोको ट्रिपल वर्ग क्यामेराको पुष्टि गर्‍यो
पुष्टि भयो: हुआवे मेट २० प्रोमा ट्रिपल स्क्वायर रियर क्यामेरा हुनेछ। Huawei को उच्च क्यामरा क्यामेरा बारे अधिक जान्नुहोस्।
सम्मान म्याजिक २ अक्टुबरको अन्तमा प्रस्तुत गरिनेछ
Honor Magic2आधिकारिक रूपमा अक्टुबर २ 26 मा जारी गरिनेछ। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्तको प्रस्तुतीकरणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सामसु आईफोनहरूको लागि OLED स्क्रीनहरूको एक मात्र निर्माता हुन रोकिनेछ
कोरियन कम्पनी सामसु मात्र त्यस्तो आईफोन हुनेछैन जसले नयाँ आईफोन मोडेलको ओएलईडी प्यानल निर्माण गर्नेछ।
नयाँ Honor फोन बजारमा आउँदैछ
TENAA डाटाबेसमा नयाँ Honor फोन दर्ता गरिएको छ। ब्रान्डको अर्को मोबाइलको प्राविधिक विवरणहरूका बारे थप जान्नुहोस्।
पुष्टि भयो: वनप्लस T टीले case.mm एमएम ज्याक अडियो कनेक्टरलाई बिदाई दिन्छ, यसको केस अनुसार
वनप्लस T टीको भर्खरै आएको फाईलले पुष्टि गर्दछ कि उच्च-अन्तमा 6. mm एमएम जैक अडियो कनेक्टर हुनेछैन।
शाओमी मी Explorer एक्सप्लोरर संस्करणले महिनाको अन्त्यमा MIUI 8 प्राप्त गर्नेछ
शाओमी मी Explorer एक्सप्लोरर संस्करणले यस महिना MIUI १० पाउनेछ। निजीकरण तहको यस संस्करणमा तपाईंको फोन अद्यावधिक गर्ने बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
एन्ड्रोइड पाई तेस्रो-पार्टी ह्यान्डहेल्डबाट सामसु third ग्यालेक्सी S6 मा आउँदछ
यदि तपाईं सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 को मालिक हुनुहुन्छ भने, तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ। एक रोमलाई एन्ड्रोइड पाईमा अपडेट गर्न जारी गरिएको छ।
शाओमी रेडमी नोट Pro प्रोलाई फेरि फिल्टर गरिएको छ, यस पटक विनिर्देशहरूको सूचीको साथ
शाओमी रेडमी नोट Pro प्रोको स्पेसिफिकेशन सूची फुटेको छ। चीनियाँ कम्पनीबाट अर्को स्मार्टफोनको बारेमा सबै जान्नुहोस्।
Vivo V11 Pro ले एक अपडेट प्राप्त गर्दछ जसले यसलाई 4K मा भिडियो रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ
Vivo V11 Pro ले एक नयाँ अपडेट प्राप्त गर्दैछ जुन यसले 4K रिजोलुसनमा भिडियो रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ। हामी तपाईंलाई विवरण दिन्छौं।
कसरी डाउनलोड गर्ने र तपाइँको अमिटफिटको लागि नि: शुल्क वाच स्किनहरू लागू गर्ने
नयाँ शाओमी वाच NFC को साथ, हृदय दर सेन्सर र अधिक आउँछ
हुआमी अमिजिट वर्ज शियोमीको स्मार्ट वाच हो जुन अहिलेको लागि चीनमा रहनेछ। मुटुको दर सेन्सर र NFC को साथ एक घडी।
ग्यालक्सी नोटको विस्फोटहरू बजारमा फर्किन्छन्। अब यो नोट to मा भर पर्दछ
नोट दायराको नयाँ पिढी, नोट,, विस्फोटको पहिलो घटना अनुभव गरेको छ, यसको आधिकारिक प्रस्तुतीकरणको एक महिना पछि।
ग्यालक्सी J4 + र J6 + सामसु Samsung वेबसाइटमा देखा पर्दछ
ग्यालक्सी J4 + र J6 + पहिलो पटक सामसु Samsung वेबसाइटमा देखा पर्दछ। यी फोनहरू सेप्टेम्बर २ on मा अनावरण गरिएको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
शाओमी मी अन-स्क्रीन फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको साथ यस हप्ता आउने छ
शाओमीले मी -8 लाई अन-स्क्रिन फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको साथ प्रक्षेपण गर्ने छ। यस मोडेलका बारे अधिक जान्नुहोस् जुन यस हप्ता आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत हुनेछ।
शाओमी रेडमी नोट Pro प्रोमा चार क्यामेरा हुने थियो
शाओमी रेडमी नोट Pro प्रोमा चार क्यामेरा हुनेछन्। नयाँ शाओमी फोनको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन चाँडै आउँदैछ।
ग्यालक्सी ए Pro प्रोले प्रोसेसरको रूपमा स्न्यापड्रैगन 9१० प्रयोग गर्दछ
ग्यालक्सी ए Pro प्रोमा स्नैपड्रैगन 9१० प्रोसेसर हुनेछ। कोरियाली फर्मले आफ्नो नयाँ फोनको लागि छनौट गरेको प्रोसेसरको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
चाँदी ग्यालेक्सी नोट930० देशहरूमा सुरूवात हुनेछ
Countries० देशहरूले चाँदीमा ग्यालक्सी नोट receive प्राप्त गर्नेछन्। यसको नयाँ रंगमा सामसु'sको उच्च-अन्तको प्रक्षेपणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
पोकोफोन एफ 1 चाँडै नै एन्ड्रोइड पाईमा अपडेट हुनेछ
एन्ड्रोइड पाई चाँडै पोकोफोन एफ 1 मा आउँदैछ। अपडेटको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन चाँडै चिनियाँ ब्रान्डको फोनमा आउँदैछ।
ग्यालक्सी एस १० का सामसु ofका सीईओ अनुसार फरक डिजाइन हुनेछ
ग्यालक्सी S10 फरक डिजाइन प्रस्तुत गर्दछ। फर्मको नयाँ फोनहरूको डिजाइनमा सामसु ofको सीईओको पुष्टिकरण पत्ता लगाउनुहोस्।
मोटो G7 र G7 प्लसको लोगो फिल्टर गर्नुभयो
मोटो G7 र G7 प्लसको लोगो चुहावट भयो। २०१ brand मा आइपुगेको ब्रान्डको दुई नयाँ फोनको लोगोहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
MIUI 10 Mi 5, Mi 6, Mi Mix2मा आइपुग्छ
MIUI 10 को ग्लोबल संस्करण पहिलो शाओमी फोनहरूमा आउँदछ। अनुकूलन तह को यस संस्करण को विस्तार को बारे मा अधिक खोज्नुहोस्।
दुई नयाँ Huawei फोन TENAA मा लीक भएको छ
दुई Huawei स्मार्टफोन TENAA संग दर्ता गरिएको छ। चिनियाँ फर्मले हाम्रो लागि के तयार पारेको छ पत्ता लगाउनुहोस्।
शाओमीले एप्पललाई तीनवटा प्याकेजहरू थपेर नयाँ कम्पनीमा नयाँ आईफोनको मूल्यमा मक लिन्छ
शाओमीले एप्पललाई सेतो ग्लोभ थप्पड प्रदान गर्दछ यसको उत्पादनहरूको प्याकेज नयाँ आईफोनको रूपमा र समान नामको साथ।
रेजर फोन २ अक्टुबर १० मा प्रस्तुत गरिने छ
रेजर फोन २ अक्टुबर १० मा अनावरण हुनेछ। गेमि smartphone स्मार्टफोनको नयाँ पुस्ताको प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
Meizu 16X सोनी IMX380 र आईएमएक्स Arc sen० सेन्सरको साथ आर्कसफ्ट टेक्नोलोजीको साथ आउँनेछ
मीजु १ 16 एक्सको नयाँ आधिकारिक पोस्टरले खुलासा गर्‍यो कि यसले सोनी आईएमएक्स 380० र आईएमएक्स 350० सेन्सर फोटो बृद्धिका लागि आर्कसफ्ट टेक्नोलोजीको साथ प्रस्तुत गर्दछ।
ब्ल्याकभ्यू BV9600 प्लस आधिकारिक हो: नयाँ रबल्ड उच्च-अन्तका सुविधाहरू
ब्ल्याकभ्यूले ब्ल्याकभ्यू BV9600 प्लस आधिकारिक बनाएको छ, ब्रान्डको नयाँ प्रमुख। यसको सबै सुविधाहरू जान्नुहोस्।
पिक्सेल of को नयाँ टिजरले पुदीना एक्वा र withको साथ मोडेलको सम्भावना दर्शाउँछ
गुगलले नयाँ टिजर रिलीज गरेको छ त्यसैले तपाईं पिक्सेल:: पुदीनाको पानीको तेस्रो र color्ग जान्न सक्नुहुनेछ।
आईफोन XS एन्टुटुमा एक अविश्वसनीय स्कोर हुन्छ: यो कुनै पनि एन्ड्रोइडको भन्दा उच्च छ
नयाँ आईफोन एक्सएस एन्टुटुमा परीक्षण गरिएको छ र एक अद्भुत रेटिंग प्राप्त गर्दछ। नयाँ एप्पल फोनद्वारा प्राप्त परिणामहरूको बारेमा थप जान्नुहोस्।
ओप्पोसँग तीन नयाँ मिड-रेंज फोनहरू हाम्रो लागि तयार छन्
ओप्पोले TENAA डाटाबेसमा तीन नयाँ स्मार्टफोन दर्ता गरेको छ। चिनियाँ फर्मले हाम्रो लागि के तयार गरीरहेछ पत्ता लगाउनुहोस्।
नोकिया 3.1.१ ले एन्ड्रोइड .8.1.१ ओरेओ प्राप्त गर्न सुरु गर्दछ
नोकिया 3.1.१ एन्ड्रोइड .8.1.१ ओरेओमा अपडेट हुन थाल्छ। यस फोनमा आइपुग्न थालेको अद्यावधिकको बारेमा बढि खोजी गर्नुहोस्।
सुन्तलाका साथ नयाँ आईफोनका यी मूल्यहरू हुन्
यी आईफोन एक्स र ओरेन्जको साथ XS MAX को मूल्यहरू हुन्। एप्पल फोनहरूको नयाँ मूल्यहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
हनर भ्यू १० पहिले नै GPU टर्बो प्राप्त गर्दैछ
हनर भ्यू १० नयाँ अपडेट प्राप्त गर्दैछ, जसमा GPU टर्बो टेक्नोलोजी आउँदछ। यो नवीनता को बारे मा अधिक जान्नुहोस्।
शाओमी मी Youth युथको सुनौलो संस्करण हुनेछ
शाओमी मी Youth यूथ पनि गोल्डमा लॉन्च हुनेछ। चिनियाँ ब्रान्डको फोनको नयाँ संस्करणको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन यस हप्ता आइपुग्छ।
स्यामसंग अक्टुबर ११ मा क्वाड क्यामेरा फोन अनावरण गर्ने
चार क्यामेरा सहितको Samsung फोन अक्टुबर ११ मा आइपुग्नेछ। यस फोनको अनावरण हुने मितिको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट ले नयाँ अपडेट प्राप्त गर्दछ: यसले सुपर स्लो-मोशन र एआर इमोजिस प्राप्त गर्दछ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट सुपर सुपर स्लो मोशन र एआर इमोजिसमा रेकर्डिंगको लागि समर्थनको साथ एक नयाँ अपडेट प्राप्त गर्दछ। हामी तपाईंलाई विवरण दिन्छौं।
मोटो मोड कुञ्जीपाटी मोटो Z को लागि रद्द गरियो
मोटो Z को लागि कुञ्जीपाटी सहित मोटो मोड रद्द गरिएको छ। यस प्रोजेक्ट किन रद्द गरिएको छ भन्ने बारे कारणहरूको बारेमा अधिक खोज्नुहोस्।
हुवावेको फोल्डेबल फोन २०१ in मा आउँदैछ
हुवावेले यसको फोल्डेबल फोन २०१ the मा मार्केटमा सुरु गर्नेछ। बजारमा यो हस्ताक्षर फोन को आगमन को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
आईफोन XS, आईफोन XS अधिकतम, ग्यालक्सी नोट,, ग्यालक्सी S9 + र Huawei P9 प्रो बीच तुलना,
सेप्टेम्बर १२ मा प्रस्तुत गरिएको आईफोनको नयाँ पुस्ताले हामीलाई हालको उच्च-एन्ड्रोइडसँग तुलना गर्न बाध्य पार्दछ
वनप्लस T टीमा mm.mm एमएम अडियो ज्याक छैन
वनप्लस T टीमा 3.5.mm एमएम अडियो जैक हुनेछैन। चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्तमा यस अनुपस्थितिको कारणहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सोनी Xperia XZ3 अब स्पेनमा आरक्षित गर्न सकिन्छ
स्पेनमा सोनी Xperia XZ3 सुरक्षित गर्न अब सम्भव छ। जापानी फर्म को नयाँ उच्च अंत को आरक्षण को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
तत्काल सन्देश अनुप्रयोगहरू विरूद्ध सामसु and र गुगल टीम
सामसु and र गुगल सन्देश अनुप्रयोगहरू लडिरहेका छन्। यस क्षेत्रका दुई कम्पनीहरूको संघको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
LG V40 अक्टुबर be मा प्रस्तुत गरिनेछ
LG ले LG V40 परिचय अक्टोबर on मा दक्षिण कोरियामा गर्नेछ। ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्त दायराको प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S10 को सब भन्दा उन्नत संस्करण ट्रिपल रियर क्यामेराको साथ आउँनेछ
नयाँ डाटाले सुझाव दिन्छ कि सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S10 तीन फरक प्रकारहरूमा आउँदछ, ती मध्ये तीन क्यामेराको साथ। यस सम्भावित तथ्यको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
Honor 8X अक्टुबर ११ मा युरोपमा आइपुग्नेछ
Honor 8X अक्टुबर ११ लाई प्रागमा प्रस्तुत गरिनेछ। अर्को महिना यूरोपीय बजारमा ऑनर फोनको आगमन बारे फेला पार्नुहोस्।
Asus ROG फोन आधिकारिक रूपमा सुरू गरिएको छ: स्नैपड्रैगन 845 with को साथ पूरै गेमि phone फोन
Asus ROG फोन चीन मा शुरू गरिएको छ। एशियाई बजारमा यसको विशेषताहरू, मूल्य र उपलब्धताका बारे सबै सिक्नुहोस्।
सियाओमीले संकेत गर्यो कि यसले phones 699 $ $ भन्दा माथि मुल्यको स्मार्टफोन बेच्दैन
टेलिफोनीको विश्वमा बेंचमार्क फर्म बन्नको खोजीमा एसियाली कम्पनी शियाओमीले ir 699 $ higher भन्दा बढी मुल्यमा स्मार्टफोन बेच्ने छैन भनेर पुष्टि गर्‍यो।
हुवावे वाच जीटी र ऑनर वाच प्रमाणित गरिएको छ
Huawei वाच GT र ऑनर वाच यूरोप मा प्रमाणित। चिनियाँ ब्रान्डबाट यी दुई नयाँ घडीहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्
Meizu 16X सेप्टेम्बर 19 मा प्रस्तुत गरिनेछ
आधिकारिक: Meizu 16X सेप्टेम्बर 19 मा अनावरण हुने छ। यस नयाँ फोनको सुरुवातको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
वनप्लस र गुगल खेल बनाउनको लागि फोर्समा सामेल हुन्छन्
वनप्लस र गुगलले क्र्याकबलले नयाँ खेल सिर्जना गर्दछ। यस कम्पनीको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन दुई कम्पनीहरू बीचको संघबाट जन्म भएको थियो।
एक Xiaomi Mi 8 युवा ढाँचा संग पुष्टि
शाओमी मी Youth युथको संस्करण ढाँचाको साथ जारी गरिनेछ। चिनियाँ ब्रान्डबाट नयाँ फोनको यस संस्करणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सन् २०१5मा यसको पहिलो G जी फोन सुरूवात गर्नका लागि सम्मान
ऑनरले आफ्नो पहिलो फोन २०१G मा G जी समर्थनको साथ सुरू गर्नेछ। चिनियाँ निर्माताबाट G जी पाउनको लागि पहिलो फोनको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
गुगलले पिक्सल present लाई पेरिसमा पनि प्रस्तुत गर्दछ
गुगल पिक्सेल पेरिसमा अक्टुबर presented मा पनि प्रस्तुत गरिने छ। नयाँ फोन सुरुवात मिति को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
AnTuTu द्वारा, बजारमा उत्तम प्रदर्शन-मूल्य अनुपातको साथ फोनको श्रेणी निर्धारण
एन्टुले एक अध्ययन गर्‍यो जुन मार्केटमा सब भन्दा राम्रो प्रदर्शन मूल्य अनुपात फोनहरू उनीहरूको मूल्य सीमा अनुसार वर्गीकृत गरिएको छ।
Meizu 16X भोली प्रस्तुत गरिने छ: यो हामी नयाँ फोनबाट केहि आशा गर्छौं
Meizu 16X भोली घोषणा गरिने छ। यो नयाँ मिड-रेंज फोनको साथ एशियाई कम्पनीले हाम्रो लागि के तयार गरेको छ पत्ता लगाउनुहोस्।
दा भिन्सी ग्यालक्सी नोट १० को आन्तरिक नाम हो
सामसुले पहिले नै काम गरिरहेको छ, आशा गरे अनुसार ग्यालक्सी नोट १० मा, टर्मिनल जुन दा भिन्चीको रूपमा बप्तिस्मा गरिएको छ, आन्तरिक नामको रूपमा
Chuwi Hi9 PRO समीक्षा भिडियो। अब € १२० भन्दा कमको लागि बिक्रीमा !!
MIUI १० को अद्भुत नयाँ सुविधा: खाली स्थानमा बचत गर्नका लागि व्हाट्सएप सफा गर्नुहोस्
र व्हाट्सएप सफा गर्नु भनेको तस्बिर, भ्वाइस मेमो, भिडियो, र अधिकबाट भण्डारको सम्पूर्ण डाटालाई मेटाउनु हो।
Vivo Y97 आधिकारिक रूपमा चीन मा सुरू गरिएको छ
Vivo Y97 भर्खरै चीनमा सुरू गरिएको छ। यो नयाँ मिड-रेंज स्मार्टफोनको बारे सबै सिक्नुहोस् मेडिएटेकबाट हेलियो P60 प्रोसेसरको साथ।
Huawei Y9 (२०१)) TENAA मा फिल्टर गरिएको छ र यसको डिजाइन खुलासा गरिएको छ
Huawei Y9 (२०१)) भर्खरै TENAA, चीनियाँ एजेन्सीमा लीक भएको छ। एशियन फर्मले अर्को वर्षको लागि हाम्रो लागि के तयारी गरेको छ पत्ता लगाउनुहोस्।
ग्यालक्सी नोट camera क्यामेरा DxOMark अनुसार बजार मा दोस्रो उत्तम हो
DxOMark मा केटाहरूले नयाँ ग्यालक्सी नोट9विश्लेषण गरिसकेका छन, एक टर्मिनल जुन स्मार्टफोनको सर्वश्रेष्ठ क्यामेराको दोस्रो स्थानको लागि बसोबास गर्दछ।
हुवावे भिडियो: स्ट्रिमि service सेवा स्पेनमा आइपुग्छ
हुवावे भिडियो: हुवावेको नयाँ स्ट्रिमिंग सेवा। चिनियाँ ब्रान्डले पहिले नै प्रस्तुत गरिसकिएको यस स्ट्रिमिंग प्लेटफर्मको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J6 + र गैलेक्सी J4 + चाँडै नै घोषणा गरिने छ
सामसुले ग्यालेक्सी J6 + र ग्यालक्सी J4 + चाँडै पेश गर्नेछ। फर्मको दुई नयाँ मध्य-दायरा फोनहरूको आगमनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सामसु'sको फोल्डेबल फोन नोभेम्बरमा अनावरण हुने छैन
सामसु्गले नोभेम्बरमा यसको फोल्डेबल फोन प्रस्तुत गर्दैन। फर्मका मुख्य कार्यकारी अधिकृतले पुष्टि गरे कि फोन २०१ 2018 मा प्रस्तुत गरिने छैन।
शाओमी मी Youth युवा सेप्टेम्बर १ on मा प्रस्तुत गरिने छ
शाओमी मी Youth युवा सेप्टेम्बर १ on मा प्रस्तुत गरिने छ। चिनियाँ ब्रान्डबाट नयाँ फोनको प्रस्तुतीकरणका बारे अधिक जान्नुहोस्।
स्न्यापड्रैगन Wear 3100: Wear OS को लागि नयाँ प्रोसेसर
स्न्यापड्रैगन वेयर 3100१००: पोशाक ओएस घडीहरूको लागि प्रोसेसर। यस नयाँ प्रोसेसरको बारेमा ब्राण्डबाट फेला पार्नुहोस् जुन प्रस्तुत भैसकेको छ।
OnePlus 6T अक्टुबर १ presented मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ
वनप्लस T टी अक्टुबर १ presented मा प्रस्तुत गरिने छ। मिति को बारे मा अधिक जान्नुहोस् जुन मा चिनियाँ ब्रान्ड को नयाँ उच्च अंत प्रस्तुत हुनेछ।
गुगलले यस बर्ष नयाँ स्मार्टवाच प्रस्तुत गर्दैन
धेरैले अफवाहहरू बनेका छन जुन एन्ड्रोइड वेयर, अब WearOS, लाई वर्षभरि घेरेका छन्। त्यो यदि गुगलले प्लेटफर्म स्थिर गर्न चाहेको हो र ईन्टरनेट खोज विशालले पुष्टि गरेको छ कि यसले यस बर्ष एक स्मार्टवाच प्रस्तुत गर्दैन।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J5 प्राइमले पहिले नै Android .8.0.० Oreo प्राप्त गर्दैछ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J5 प्राइमले पहिले नै Android .8.0.० Oreo प्राप्त गर्दैछ। गुगलको अपरेटिंग प्रणालीको यो संस्करणको प्रसारको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
ओप्पो ए X एक्स आधिकारिक हो: .7..6.3 इन्च फुल एचडी + स्क्रीन, हेलियो पी So० एसओसी र अधिक
ओप्पो A7X आधिकारिक हो। चीनियाँ कम्पनीबाट नयाँ स्मार्टफोनको प्राविधिक विवरणहरू र सुविधाहरूको बारेमा जान्नुहोस्।
मोटो G7 रेन्डरमा फिल्टर गरीन्छ र यसको डिजाइन प्रकट हुन्छ [भिडियो]
मोटो G7 को अवधारणा भिडियो भर्खरै जारी गरिएको छ। यसले यसको सबै डिजाइन विवरण गर्दछ जुन मोटो जी to मा राम्रो उत्तराधिकार हुनेछ।
शाओमी रेडमी नोट The को स्क्रिन लीक भएको छ: .6.१6.18 ″ प्यानल निचको साथ
प्यानल र रक्षक जसले Xiaomi Redmi नोट6लीक भएको थियो। यो .6.18.१XNUMX इन्च हो र एक खाच छ। पत्ता लगाउनू!
जिओक्सुन चिल्ड्रन स्मार्टवाच एस २, बच्चाहरूको लागि डिजाइन गरिएको सस्तो स्मार्टवाच
जिओक्सुन चिल्ड्रन स्मार्टवाच एस २ चीनमा सुरू गरिएको छ। बच्चाहरूको लागि बनाइएको यो नयाँ कम-लागत स्मार्टवचको बारेमा सबै जान्नुहोस्।
शाओमी मी 8 युवा पूर्ण रूपमा चुहावट छ
शाओमी मी Youth युवाको डिजाईन र विशिष्टताहरू फिल्टर गर्नुहोस्। Xiaomi Mi 8 परिवारको नयाँ सदस्यको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
Huawei Mate 20 Pro को नयाँ छवि फिल्टर गरियो
Huawei Mate 20 Pro को नयाँ लीक छवि। अक्टूबरमा आएको चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्तमा लीक भएको नयाँ फोटोको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस्।
शाओमी मी Explorer एक्सप्लोरर संस्करणको अर्को नाम चीन बाहिर हुनेछ
शाओमी मी Explorer एक्सप्लोरर संस्करणले चीनको बाहिर यसको नाम परिवर्तन गर्दछ। अन्य बजारहरूमा उच्च-अन्तको नयाँ नामको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
TENAA मा नयाँ स्मार्टफोन लीक हुन्छ: Vivo V1730EA
Vivo ले नयाँ र आगामी प्रक्षेपणको तयारी गरिरहेको छ जस्तो देखिन्छ, किनकि यस फर्मको स्वामित्वको एक उपकरण भर्खर TENAA मा देखा पर्‍यो। यसलाई जान्नुहोस्!
मोटोरोलाले मोटो जी Plus प्लसमा एन्ड्रोइड ओरेओ परीक्षण गर्नेछ
मोटोरोलाले मोटो जी Plus प्लसमा ओरियोको चाँडै परीक्षण सुरू गर्दछ। फोनमा एन्ड्रोइड Oreo को आगमन को बारे मा अधिक जान्नुहोस्।
प्राविधिक विशिष्टता र ओप्पो A7X को लीक रेन्डर, फर्मको अर्को मध्य-दायरा
ओप्पो ए X एक्स यसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्सको साथ रेन्डरमा लीक भएको छ। एशियाई कम्पनीको अर्को मध्य-दायरा बारे अधिक जान्नुहोस्।
रेज़र फोन २ उच्च-एन्डको जस्तो एन्टुको वरिपरि हिंड्छ
Razer फोन2AnTuTu को माध्यम बाट जान्छ र यसको धेरै प्राविधिक विशेषताहरु लाई प्रकट गर्दछ। कम्पनीले हाम्रो लागि स्टोरमा के छ पत्ता लगाउनुहोस्।
सबै सामसु devices उपकरणहरू २०२० मा कृत्रिम बुद्धिमत्ता हुनेछ
सबै सामसु devices उपकरणहरूले २०२० मा कृत्रिम बुद्धिको प्रयोग गर्ने छ। फर्मको उत्पादनहरुमा यस प्रविधि को उपयोगको बारे मा अधिक जानकारी लिनुहोस्।
HTC क्वालकॉमको स्नैपड्रैगन 855 XNUMX सँग काम गर्दैछ
भर्खरको जानकारीले संकेत गर्दछ कि HTC, एक ताइवान फर्म, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 XNUMX को परीक्षण गर्दैछ। यसका बारे बढि जान्नुहोस्।
शाओमी इन्डोनेसियाको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो फोन निर्माता हो
शाओमीले आफूलाई दोस्रो स्मार्टफोन निर्माताको रूपमा स्थापित गरेको छ। पत्ता लगाउनू!
ZTE Axon9Pro विभिन्न सुविधाहरूको साथ TENAA मा देखा पर्दछ
ZTE Axon9Pro TENAA प्रमाणीकरण पृष्ठमा सूचीबद्ध छ र दुई भिन्न प्रकारका बिभिन्न सुविधाहरू देखा पर्दछ
Razer फोन २ को पहिलो विशिष्टता फ़िल्टर गरियो
Razer फोन २ को पहिलो विशिष्टता लीक भयो। नयाँ गेमि smartphone स्मार्टफोनको पहिलो विशिष्टताको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस्।
मोटो G5 र G5 प्लस एन्ड्रोइड Oreo प्राप्त गर्न शुरू
Android Oreo Moto G5 र G5 Plus मा आउन थाल्छ। यी ब्रान्ड फोनहरूको लागि अद्यावधिक आगमनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
एक रहस्यमय शाओमी M1808D2TE टेनाको वरिपरि हिंड्छ। यो Mi 8 युवा हुनेछ?
कोड "M1808D2TE" भएको Xiaomi भर्खर TENAA द्वारा प्रमाणित गरिएको छ। सबै कुराले संकेत गर्दछ कि यो शाओमी मी 8 युवा हुन सक्छ।
Meizu 16X सम्पूर्ण मध्य-दायराको रूपमा AuTuTu मा स्कोर गरिएको छ
Meizu 16X भर्खर AnTuTu को माध्यम बाट फेरि गए,। यो नयाँ निस्पंदन मा, टर्मिनल द्वारा प्राप्त परिणाम प्रकट हुन्छ। यसलाई जान्नुहोस्!
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 को लागि Google पिक्सेल GCam को अन्तिम कार्यात्मक पोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्
अन्तमा, ग्यालक्सी S9 को Exynos संस्करणको लागि एक कार्यात्मक पोर्ट छ जुन तपाईंलाई गुगल पिक्सेलको पोर्ट्रेट मोड र HDR + २०१ use प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
ग्यालक्सी दृश्य २ ले वाइफाइ एलायन्स र ब्लुटुथ SIG प्रमाणीकरण पार गर्दछ
अगस्तको अन्त्यमा, हामीले एउटा समाचार कहानीमा भन्यौं कि कोरियाली कम्पनीले सामसु Galaxy ग्यालेक्सी भिउ २ को दोस्रो पुस्तामा काम गरिरहेको थियो दोस्रो दोस्रो पुस्ताले बजारमा हिर्काउन सक्नेछ, दुई आवश्यक र समान महत्वपुर्ण प्रमाणपत्र पारित गरेपछि।
OPPO Find X आधिकारिक रूपमा स्पेनमा सुरू गरिएको छ
OPPO Find X आधिकारिक रूपमा आज स्पेन आइपुग्छ। स्पेनमा नयाँ चिनियाँ ब्रान्ड फोनको सुरुवातका बारे थप जानकारी लिनुहोस्
सामसुले ग्यालक्सी एस १० को संस्करण launch जीको साथ सुरु गर्ने छ
सामसुले ग्यालक्सी एस १० मा G जी समर्थनको साथ काम गर्दछ। यस उच्च-अन्त संस्करणको बारेमा अधिक फेला पार्नुहोस् जुन फर्मले बजारमा सुरू गर्न गइरहेको छ।
नोकिया of को नयाँ छवि लीक भयो
नोकिया of को पाँच क्यामेराको नयाँ छवि लीक भयो। ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्त र यसको पाँच पछाडिको क्यामेराको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
शाओमी मी ब्यान्ड Spain आजबाट स्पेनमा उपलब्ध छ
तपाईं अब स्पेनमा शाओमी मी ब्यान्ड buy खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेनमा चिनियाँ ब्रान्डको ब्रेसलेटको प्रक्षेपणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
शाओमी मी Youth युथका धेरै प्रमुख सुविधाहरू फिल्टर गरिएका छन्
भर्खरको चुहावटले भर्खरको Xiaomi Mi 8 युवाको प्रमुख प्राविधिक विशेषताहरू पत्ता लगाएको छ। जान्नुहोस् कि शाओमीले हाम्रो लागि के तयार गरीरहेको छ।
मोटो P30 प्ले मोटोरोला वेबसाइटमा पूर्ण रूपमा चुहावट भयो
मोटोरोला वेबसाइटमा पूर्ण रूपमा फिल्टर गरिएको मोटो P30 प्ले। ब्रान्डको नयाँ फोनको बारेमा बढि जान्नुहोस् जुन चाँडै मार्केटमा आइपर्नेछ।
Vivo X23 अब आधिकारिक छ: कम निचको साथ प्रीमियम मध्य-दायरा
Vivo X23: विशिष्टता, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। आज प्रस्तुत गरिएको चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ फोनको बारेमा सबै फेला पार्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी वाच अब स्पेनमा उपलब्ध छ
ग्यालेक्सी वाच आधिकारिक रूपमा स्पेनमा बिक्रीमा छ। नयाँ कोरियाली ब्रान्ड वाचको सुरुवातको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
अमेजनले आफ्नो नयाँ फायर एचडी tablet ट्याब्लेट प्रस्तुत गर्दछ, नयाँ उत्पादको नयाँ पुस्ता जुन डोनट्स जस्ता बिक्री गर्दछ
अमेजनले भर्खर आफ्नो नयाँ फायर एचडी launched सुरू गर्यो। ट्याब्लेट जुन सबै प्रकारका जेबाहरूका लागि आउँदछ 8eयूरोमा किन्नका लागि।
श्याओमी दोस्रो सबैभन्दा बेच्ने पहिरन योग्य ब्रांड हो
शाओमी विश्वव्यापी रूपमा दोस्रो बेच्ने योग्य पहिरन ब्रांड हो। यस खण्डमा चिनियाँ ब्रान्डको बिक्रीको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
इन-स्क्रिन फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको साथ पहिलो सामसु October अक्टोबरमा आउँनेछ
फिंगरप्रिन्ट रिडरको साथ पहिलो सामसु model मोडेल अक्टुबरमा देखा पर्नेछ। यस हस्ताक्षर फोनको सुरुवातको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
नोकिया of को पहिलो फोटोले हामीलाई यसको पाँच रियर क्यामेरा हेर्नको लागि अनुमति दिन्छ
हामी पहिले नै नोकिया9का पहिलो क्यामेरा पहिलो पटक देख्न सक्छौं। ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्तको डिजाईनको बारेमा बढि जान्नुहोस् जुन चाँडै आउँदैछ।
LG Q Stylus Plus भारतमा .18.२ इन्च १ 9: screen स्क्रिनको साथ सुरू भएको छ
LG Q Stylus + भर्खर २१ 21.990,। ०० को मूल्यमा भारतमा सुरू गरिएको छ। यस उपकरणको भारतीय देशको आगमनको बारेमा सबै जान्नुहोस्।
सामसु'sको फोल्डेबल फोनको दुई स्क्रीन हुन्छ
सामसु'sको फोल्डेबल फोनले दुई स्क्रीन देखाउनेछ। नोभेम्बरमा आएको कोरियाली फर्मबाट फोल्डिंग फोनको बारेमा बढि खोजी गर्नुहोस्।
Honor 8X र 8X अधिकतम ठूलो स्क्रीन र विशाल बैटरीको साथ प्रस्तुत छन्
Honor 8X र 8X अधिकतम अब आधिकारिक हो। भर्खरै घोषणा गरिएको ब्रान्डको यी दुई नयाँ मध्य-रेंज उपकरणहरूको बारेमा सबै जान्नुहोस्।
Vivo V11 र V11i: ब्रान्डको नयाँ फोनहरूको विशेषता र प्राविधिक विवरण
Vivo V11 र V11i भर्खरै प्रस्तुत गरिएको छ। चीनियाँ कम्पनीको नयाँ स्मार्टफोनको बारेमा सबै जान्नुहोस्।
Huawei P स्मार्ट +: एआईको चार क्यामेराको साथ Huawei बाट नयाँ
Huawei P स्मार्ट + आधिकारिक हो। किरीन 710१० को साथ यो नयाँ टर्मिनलका सबै सुविधाहरू र प्राविधिक विवरणहरू जान्नुहोस्।
Nubia Z18 आधिकारिक हो: 5.99 ″ फुलएचडी + डिस्प्ले, स्न्यापड्रैगन 845 So SoC र अधिक
Nubia Z18 फर्म द्वारा भर्खर प्रस्तुत गरिएको छ। यो भर्खरै घोषणा गरिएको उच्च प्रदर्शन उपकरणको बारेमा सबै जान्नुहोस्।
ग्यालक्सी नोट and र ग्यालेक्स एस Ed एज + मासिक सुरक्षा अपडेटहरू प्राप्त गर्न रोकिनेछ
कोरियाली कम्पनी सामसुले भर्खरै घोषणा गरिसकेको छ कि ग्यालेक्सी नोट Galaxy र ग्यालक्सी एस Ed एज + दुबै सामान्य मासिक अपडेटहरू लिने छैन। ग्यालेक्सी नोट5र ग्यालक्सी एस Ed एजको लागि मासिक सुरक्षा अपडेटहरू वास्तविकतामा छैनन्।
LG Q9 का धेरै प्राविधिक विवरण लीक भएको छ
LG Q9 का बिभिन्न सुविधाहरू र स्पेसिफिकेसन लीक भएको छ। यस उपकरणको बारेमा बढि जान्नुहोस् जुन चाँडै प्रस्तुत हुनेछ।
ऑनर प्ले, यो गेनर प्रति सम्मान को प्रतिबद्धता हो
यो Honor Play हो, गेनर क्षेत्र को लागि सम्मान को शक्तिशाली प्रतिबद्धता, जो गेमरहरु को छैन को ध्यान को पनि आकर्षित गर्दछ।
सोनीले यसको आधिकारिक ताइवान पृष्ठमा GB जीबी र्यामको साथ एक्सपेरिया XZ3 ह्या hang्ग गर्दै छ
सोनीले खुलासा गर्‍यो कि ताइवानको Xperia XZ3 6GB रिम क्षमताको साथ आउँदछ। यस भर्खरको समाचारको बारेमा बढि जान्नुहोस्
सामसुले यस फोल्डिंग स्मार्टफोन यस बर्षको नोभेम्बरमा प्रस्तुत गर्न सक्दछ
धेरै भनेका छन, बजारमा फोल्डिंग स्क्रिन भएको यो पहिलो स्मार्टफोन कसरी हुन सक्छ भन्ने बारे कयास र अफवाह छ, जुन सम्मान अनुसार सबै कुरा बजारमा पहिलो फोल्डिंग स्मार्टफोनले सामसु ofको हातबाट अर्को नोभेम्बरमा देख्न सक्दछ।
हो, चाँडै तपाईं ग्यालक्सी नोट9को Bixby बटन निष्क्रिय गर्न सक्षम हुनुहुनेछ
सामसु'sको ग्यालेक्सी नोट ले एक नयाँ अद्यावधिक प्राप्त गर्नेछ जसले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई बििक्सबी बटन असक्षम गर्न मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ जुन उनीहरू चाहानुहुन्छ।
एन्टटु बेन्चमार्कका अनुसार अगस्त २०१ 10 को १० सब भन्दा शक्तिशाली फोनहरू
AnTuTu ले यस वर्षको अगस्ट महिनाको १० सब भन्दा शक्तिशाली स्मार्टफोन्सको रैंकिंग ल्याउँदछ, जसमा सियामी ब्ल्याक शार्क र अन्यहरू छन्।
सामसु'sको फोल्डेबल फोन नोभेम्बरमा खोलिनेछ
सामसु्गले नोभेम्बरमा यसको फोल्डेबल फोन प्रस्तुत गर्दछ। यस वर्ष कोरियाली फर्मको फोनको आगमनका बारे अधिक जान्नुहोस्।
हुवावे मेट २० लाइट अर्को हप्ता स्पेनमा आउनेछ
हुवावे मेट २० लाइट स्पेनमा १० सेप्टेम्बरमा सुरू हुन्छ। नयाँ Huawei फोन स्पेन मा आगमन को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
Huawei स्मार्टवाचहरु को बारे मा बिर्सिएको छैन, यो नया खोजिरहेको छ
हुवावेका सीईओले भनेका छन कि कम्पनीले स्मार्ट वाचको खण्ड बिर्सेको छैन र बरु एक योग्य प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजिरहेको छ।
के स्यामसंगले चार रियर क्यामेराको साथ फोन सुरू गर्दछ?
सामसुले चार रियर क्यामेराको साथ फोन सुरू गर्न सक्दछ। कोरियाली ब्रान्डबाट यस अनुमानित फोनको बारेमा अधिक खोजी गर्नुहोस्।
वनप्लस for को लागि एन्ड्रोइड .9.0 .० पाईको पहिलो खुला बीटा सुरुवात गर्‍यो
वनप्लसले एन्ड्रोइड .9.0 .० पाई ओपन बीटा वनप्लस ches. को लागि सुरू गर्‍यो उच्च-अन्तको लागि यो खुला बेटाको सुरूको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
मोटोरोला P30 नोट सुरुवात भएको छ: .6.2.२ ″ FHD + प्यानल, notch साथ, SD636 र 5.000,००० mAh ब्याट्री
मोटोरोला P30 नोट भर्खरै चीनमा सुरू गरिएको छ। हालसालै परिचय गरिएको मध्य-दायरा उपकरणको बारेमा थप जान्नुहोस्।
यसको सुरू भएको दुई दिन पछि, Honor 8X TENAA मा लीक हुन्छ
Honor 8X भर्खर TENAA, चीनियाँ एजेन्सीमा फेरीएको छ। यस उपकरणको बारेमा के प्रकट गरिएको थियो भन्ने बारे अधिक जान्नुहोस्।
सोनी Xperia XZ3 अब यूरोप मा रिजर्व गर्न उपलब्ध
सोनी Xperia XZ3 को लागि आरक्षण अवधि यूरोपमा खुल्छ। तपाईं पहिले नै युरोपमा नयाँ सोनी उच्च-आरक्षण आरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ।
न्युबिया रेड मैजिक २ एक स्न्यापड्रैगन 2। र माथिल्लो कुनामा बटनहरूको साथ आउँनेछ
नूबिया रेड मैजिक २ क्वालकम स्नैपड्रैगन2So एसओसी र काँधमा बटनहरूको साथ आउँदछ। हालसालै खुलासा गरिएको चुहावट बारे थप जान्नुहोस्।
अमेजनमा फिर्ता स्कूल प्रस्तावहरूको फाइदा लिनुहोस्
अमेजन: फोन र ट्याब्लेटमा स्कूल छुटमा फर्कनुहोस्। स्कूलमा फिर्ता अवसरमा स्टोरमा प्रमोशनमा रहेका उत्पादनहरू पत्ता लगाउनुहोस्
सामसुले शाओमी र ओपीपीओमा फोल्डिंग स्क्रीनहरू प्रदान गर्दछ
Xiaomi र OPPO सामसु fromबाट फोल्डिंग स्क्रीनहरू प्राप्त गर्दछ। यस क्षेत्र मा दुई कम्पनीहरु को सहकार्य को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
Meizu M8 TENAA मार्फत जान्छ र यसको मुख्य सुविधाहरू प्रकट गर्दछ
Meizu M8 भर्खर TENAA मा 5.7 इन्च HD + स्क्रीन र २.० GHz अक्टा-कोर प्रोसेसरको साथ हिट भयो। हामी तपाईंलाई विस्तार गर्दछौं।
LG V40 स्पेसिफिकेसन लीक भयो
LG V40 का स्पेसिफिकेसन्स पहिले नै चुहावट भयो। ब्राण्डको नयाँ उच्च-अन्तको स्पेशिफिकेसनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्, पहिले नै चुहावट भयो।
सोनी Xperia XZ3 मूल्य यूरोप मा प्रकट भयो
यूरोपमा सोनी Xperia XZ3 को अन्तिम मूल्य अनावरण गरियो। फर्मको नयाँ उच्च-अन्तले यूरोपमा हुने मूल्यको बारेमा बढि खोज्नुहोस्।
नयाँ स्मार्टफोनहरू पनि उस्तै छन्?
के तपाई सोच्नुहुन्न कि सबै नयाँ स्मार्टफोनहरू एक समान छन्? निशान, डुअल क्यामेरा ... के यो समय होईन जब केही फर्मले केहि फरक सिर्जना गर्ने जोखिम उठायो?
EMUI9आधारित Android पाई बीटा हुआवे र ऑनरमा आउँदछ
पहिले Huawei र Honor फोनहरूमा पहिले नै Android पाई बेटा छ। EMUI9को साथ यस बिटामा कुन मोडेलहरू छन् भनेर पत्ता लगाउनुहोस्।
गुगलले यस साल पिक्सेल वाच रिलीज गर्दैन
गुगलको पिक्सेल वाच यस बर्षमा रिलीज हुने छैन। गुगल वाच २०१ Watch मा नचल्नुको कारणका बारे बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
ZTE को पहिलो G जी फोन २०१ late को उत्तरार्धमा सुरूवात हुनेछ
जेडटीईले आफ्नो पहिलो G जी फोन २०१5को अन्त्यमा सुरू गर्नेछ। निर्माताबाट यस मोडेलको सुरूमा ढिलाइको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
लेनोवो एक retractable क्यामेरा फोन शुरू करने को लागी
लेनोभोले पनि फिर्ता लिन योग्य क्यामेरा फोनमा काम गरिरहेको छ। लेनोवो वर्तमानमा काम गर्दै यस फोनको अवधारणा पत्ता लगाउनुहोस्।
यस गिरावटमा सामसुले ग्यालक्सी जे प्राइम मोडलको सुरु गर्ने छ
गिरावटमा सामसुले दुई नयाँ ग्यालक्सी जे प्राइम फोनहरू सुरूवात गर्दछ। ब्रान्डको नयाँ निम्न-अन्तत फोनहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
Huawei P20 भन्दा बढी एक मिलियन इकाइहरु बेचेको छ
Huawei P20s १० लाख एकाई बेचे। Huawei को बारे मा अधिक को लागी दुनिया भर मा उच्च-अन्त बिक्री को बारे मा खोज्नुहोस्।
वनप्लसले पेरिसमा आफ्नो पहिलो भौतिक स्टोर खोल्नेछ
वनप्लसले पेरिसमा युरोपमा आफ्नो पहिलो भौतिक स्टोर खोल्नेछ। फ्रान्सेली राजधानीमा चिनियाँ ब्रान्डको स्टोरको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
तीव्रले युरोपमा फर्कनका लागि तीन फोन अनावरण गर्दछ
तीव्र यूरोप को लागी तीन नयाँ फोन प्रस्तुत गर्दछ। जापानी ब्रान्डको नयाँ फोनहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन यूरोपमा सुरू हुन्छ।
आधिकारिक: हुवेले अक्टोबर १ 20 लाई लन्डनमा मेटे २० प्रस्तुत गर्नेछन्
हुवावेले भर्खरै घोषणा गरिसक्यो कि मेट २० र मेट २० प्रो अक्टुबर १ London मा लन्डनमा अनावरण हुनेछ। फर्मले हाम्रो लागि के तयारी गरेको छ पत्ता लगाउनुहोस्।
Mbuynow ब्याकप्याक, USB र हेडफोन पोर्टको समीक्षा
तपाईको स्मार्टफोन ल्याउनका लागि तपाईको ल्यापटप बोक्नका लागि धेरै नै आधुनिक बैकप्याक, Mbuynow ब्याकपॅकलाई भेट्नुहोस् र तपाईले हेडफोन जडान गर्न सक्नुहुनेछ।
हुवावे मेट २० लाइट आधिकारिक छ: .20..6.3 ″ स्क्रिन, किरीन 710१०, 3.750,,XNUMX० एमएएच ब्याट्री र अधिक
हुवावे मेट २० लाइट अब आधिकारिक छ। ब्रान्डको किरीन 20१० प्रोसेसरको नयाँ फोनको बारेमा सबै जान्नुहोस्।
फ्रान्सेली ब्रान्डबाट दुई थप नयाँ फोनहरू: विको दृश्य २ प्लस र विको ह्यारी २
विको ह्यारी २ र विको भिउ २ प्लसको आईएफएमा प्रस्तुतीकरणका साथ फ्रान्सेली एन्ड्रोइड फोन ब्रान्डको लागि शुभ दिन हो।
Vivo X23 स्न्यापड्रैगन 670० को साथ एन्टुमा लीक भयो
Vivo X23 भर्खर AnTuTu को माध्यम बाट गएको छ र noas आफ्नो मुख्य सुविधाहरु प्रकट गरेको छ। यो मध्यम-दायरा उपकरणको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
किरीन 980 XNUMX० Huawei को सब भन्दा शक्तिशाली प्रोसेसर अब आधिकारिक छ
Huawei Kirin 980 प्रस्तुत गर्दछ, यसको सब भन्दा शक्तिशाली प्रोसेसर। आइएफए २०१ at मा प्रस्तुत नयाँ उच्च-अन्त प्रोसेसरको बारेमा सबै फेला पार्नुहोस्।
अल्काटेल T टी:: बजारमा पहिलो Android Go ट्याब्लेट
Alcatel 3T 8: Android Go को साथ पहिलो ट्याब्लेटको विवरण। एन्ड्रोइड गोको साथ बजारमा पहिलो ट्याब्लेटको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
Pocophone F1 मा Netflix HD भिडियोहरू प्ले गर्न सक्दैन
Pocophone F1 नेटफ्लिक्स मा HD भिडियो चलाउन सक्दैन। यस समाचारको बारेमा अधिक जान्नुहोस् जुन विगत केहि घण्टामा खुलासा भएको छ।
विको दृश्य २ गो: खाच र ,2००० एमएएच ब्याट्रीको साथ एक इनपुट दायरा
विको दृश्य २ गो: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। आईएफए २०१ at मा प्रस्तुत गरिएको ब्रान्डको नयाँ निम्न-अन्तको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
गुगल पिक्सेल of का वास्तविक छविहरू फिल्टर गरिएका छन्
गुगल पिक्सेलको पहिलो वास्तविक छविहरू फिल्टर गर्नुहोस् the अक्टुबरमा आइपुग्ने नयाँ उच्च-अन्त गुगलको डिजाइनको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
Casio Pro Trek WSD-F30: साहसिक कार्यहरूका लागि स्मार्टवाच
क्यासियो प्रो ट्रेक WSD-F30: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। यस असभ्य स्मार्टवाचको बारेमा सबै फेला पार्नुहोस् जुन IFA मा अनावरण गरिएको थियो।
मोटोरोला मोटो वन: ब्रान्डको पहिलो एन्ड्रोइड वन
मोटोरोला मोटो वन: विशिष्टता, मूल्य र सुरुवात। अपरेटिंग प्रणालीको रूपमा एन्ड्रोइड वनको साथ पहिलो मोटोरोलाको बारेमा सबै फेला पार्नुहोस्।